Ogaden News Agency (ONA) – Dagaaladii Ugu Dambeeyay ee Cadawga Lagu Naafeeyay.
Dagaaladii Ugu Dambeeyay ee Cadawga Lagu Naafeeyay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobollada Qoraxay iyo Doollo ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya dagaalo ciidanka gumaysiga Itoobiya aad loogu wiiqay oo kadhacay Goboladaas.
Dagaaladan ugu dambeeyay ayaa shalay Khamiistii ooy taariikhduna ahayd 25/2/2016 iyo maalintii Talaadada ahayd ee taariikhdu kubeegnayd 23 / 2/2016 ka dhacay deegaamo kamid ah Qoraxay & Doollo ayaa ciidanka cadawga aad loogu naafeeyay.
Warkan oo uu nasoo gaadhsiiyay Wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenia ee ONA uga soo warama Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO ayaa sheegaya in 23/2/2016 Tuulada Jugle oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Ethiopia ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 6 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
Dhinaca kale shalay oo Khamiis ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 25/2/2016 deegaanka Toondheer oo Dagmada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay inta lahubsaday 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
Warkan ayaa intaas raacinaya in deegaanka Qudhactaagtaag oo Dagmada Danood ee Gobolka Doollo katirsan dagaal culus oo ciidanka wadaniga xoraynta ogadenia iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 6 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.